Home Wararka Qoor Qoor oo sameeystay dalaaliin iyo Kursigii oo lagu iibinayo $300,000
Qoor Qoor oo sameeystay dalaaliin iyo Kursigii oo lagu iibinayo $300,000
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmad Qoor Qoor oo sameeystay shaqsiyaad dalaaliin ah oo iibinaya kuraasta xildhibaanada laga soo dooran doono Galmudug.
Qoor Qoor ayaa ay ka muuqata deg deg uu ku doonayo in uu lacag ku sameeyo isaga oo ay ka go’an tahay in uu iibiyo kuraasta xildhibaanada. Ma aha kaliya xildhibaanada uu isaga ka soo horjeedo ama Farmaajo ayan raali ka hayn balase kuwa iyaga ay doonayaan in ay soo saartaan ayaa waxaa laga rabaa in ay bixiyaan lacag.
“Waaba yaabnay markii rag aan aqaano oo ku dhaw Qoor Qoor ay ii yimadeen oo ay igu yiraahdeen, odayga ayaan ka soconaa, waana lama huraan in aad adiga iyo odayga isafgarataan si howlahaaga loo fududeeyo”. Ayuu yiri mid kamida musharaxiinta u sharxan baarlaamaanka Soomaaliya oo ka gaabsaday in aan magaciisa sheegno.
Waxa uu ku daray “ markii aan weydiiyay maxaad ula jeedaan is-afgaradka, waxa ay ii sheegeen in ay tahay in aan bixiyo lacag gaaraysa $300,000 oo Qoor Qoor la siinayo. Maalin ka dibna waxaa i soo wacay nin Qoor Qoor la joogo, isaga oo igu adkeeyay in aan meel wax isla dhigno raga la ii soo diray”.
Lacagta $300,000 waxaa ka sii dheer lacagaha kale ee ku baxaya ololaha musharaxa xildhibaanka si uu u helo codka ergada wax soo dooranaysa.
Qoor Qoor ayaa si aan gabasho lahaynin waxa uu u go’aansaday in uu lacag ka sameeyo kuraasta Aqalka Hoose iyada oo ayan jirin gabasho iyo xishood. Waxaa muuqata in dalka Soomaaliya ayan ka soo socon wax doorasho la yiraahdo balse ay tahay md ku dhisan boob iyo beecinta xildhibaanada.